I-Bonito kunye netumato kunye nepepile eyosiweyo | Iiresiphi zokupheka
I-Bonito kunye netumato kunye nepepile eyosiweyo
UMaria vazquez | | Ukupheka kweentlanzi
Ekhaya sonwaba kakhulu ngexesha le kuhle emantlaKungenxa yoko le nto sihlala sigcina isilayidi kwifriji ukuze sandise iinyanga ezimbalwa. Sihlala siyilungisa ngetswele kunye netumato. Nangona kunjalo, ngeli xesha, andinakuxhathisa ukongeza iipepile ezingathandekiyo ezigcadiweyo endandisandula ukunikwa.
El Intlanzi ye-Bonito kunye netumato Sisitya esilula semveli. Akuthathi xesha lide ukulungiselela kwaye kunokwenziwa ngobusuku obungaphambili ukuba silindele ukuba asisayi kuba nalo ixesha lokupheka ngosuku olulandelayo. Ndiyithathile ndiyokusebenza ngetupper enesaladi kunye nekomityi yerayisi.
Ukuhamba kakuhle, isilayidi esilinganayo sebhonito sanele abantu abane ukuba batye. Ngokwam, ndiyazithanda i-chubby ukuze zingomi. Ukuze ndiyiphephe ndiyahlaba Zitywine ngaphambili kwaye uzipheke kanye ngexesha elifanelekileyo ecaleni kwetamatato. Ngaba unesibindi sokuyilungiselela?
I-bonito ngetumato kunye nepelepele esiyicebisayo namhlanje sisitya sendabuko esilula kakhulu ukulungiselela yonke intsapho.
Ixesha elipheleleyo: 1 h
1 isilayi esityebileyo sebhonito
1 itswele ebomvu, julienned
1 indebe eyenziwe ngetumato isosi
I-200 g. Ipepile eyosiweyo kwimicu
1 kg yeetumato ezivuthiweyo, blanched kunye nexolo
½ ipepile eluhlaza yentsimbi, isikiwe
I-pinch yeshukela (ukuba kuyimfuneko)
Ukwenza isonka Saute i-anyanisi kunye nepepile eluhlaza epanini kunye neoyile eyongezelelweyo yeoli yomnquma ngaphezulu / kobushushu obuphantsi kangangemizuzu eli-15. Emva koko yongeza i-tomato etyumkileyo kunye negalikhi, ixesha lonyaka kwaye upheke kubushushu obuphantsi malunga nemizuzu engama-45. Emva kwexesha siyangcamla kwaye songeza ityuwa okanye iswekile xa kukho imfuneko yokulungisa incasa. Sigciniwe
Ixesha le-bonito. Emva koko, sitshisa i-oyile epanini kwaye siphawula isilayi kumacala omabini. Siyarhoxa kwaye sigcine isitya.
Kwipani enye kunye nokongeza ioyile encinci, ukuba kukho imfuneko, fakela itswele UJulienned imizuzu eyi-15 ngaphezulu kobushushu obuphakathi / obuphantsi.
Ke sidibanisa iipepile kwaye usarake imizuzu embalwa kwaye emva koko uthele isosi yetumato. Sivuselela kakuhle kwaye silinde ukuba sibile.
Ke, sidibanisa i-bonito kwaye masiyenze yenziwe umlilo othambileyo phakathi kwemizuzu emi-5 ukuya kweli-8, kuxhomekeke kubukhulu.
Sisusa i-casserole emlilweni, masiphumle imizuzu embalwa kwaye sikhonze ityhuna ngetumato.
Umendo opheleleyo kwinqaku: yokuqalisa » Izitya » Ukupheka kweentlanzi » I-Bonito kunye netumato kunye nepepile eyosiweyo
Iifomati zetshokholethi ezinamakhiwane omisiweyo
ISan Jacobos ngeham kunye netshizi